Lakkoofsa maadhee keessatti, fakkeenyaaf, 1234.5678 galchi. Lakkoofsi kun bakkee deesiimaalii durtiin mul'ata, bakka deesiimaalii lamaan. Yeroo galafata mirkaneessitu 1234.57 argita. Argama galmee keessaa qofatu cufama; keessatti, lakkoofsi bakkee deesiimaalii afranuu tuqaa deesiimaalii boodatti ni qabata.
Lakkoofsota deesiimaaliidhaan dhangeessuu:
Qaree lakkoofsa irra kaa'iitii qaaqa Maadheelee Dhangeessi jalqabuuf Dhangii - Maadheelee filadhu.
Caancala Lakkoofsota irratti filannoo dhangiiwwan lakkoofsaa dur murtaawwaa argita. Jala mirgaa qaaqaa keessatti durargii akkaataa lakkoofsi ammee kee yoo dhangii murtaa'e kennuuf jettu itti mul'atu argita.
Yoo lakkoofsa bakka deesiimaalii mul'atu qofa fooyyessuu yoo barbaadde, malli salphaan sajoolee Dhangii Lakkoofsaa: Bakka Deesiimaalii Dabali ykn Dhangii Lakkoofsaa: Bakka Deesiimaalii Balleessi Kabala Dhangeessuu irraa fayyadamuu dha.
Dhangiiwwan Lakkoofsaa Fayyadamaan qindaa'an
Title is: Lakkoofsota Deesiimaaliidhaan Dhangeessuu